Caafimaadka ilmahaActuellement sélectionné
Rugta daryeelka caafimaadka carruurtu waxaa ay bixineysaa baaritaanno iyo tallaallo laakiin waxaad sidoo kale talo ka heli kartaa wax walba oo taabanaya horuumarka canugga. Marka canuggaagu uu xanuunsado oo uu u baahanyahay daryeel caafimaad waxaad la xiriireysaa rugta caafimaadka.
Meelo badan waxaa ku yaalla rug daryeel caafimaad oo carruureed oo ku dhex taalla rug qoys halkaas oo laysugu geeyay hawlo badan oo loo baahnaan karo marka carruurtu ay yar-yaryihiin.
Daryeelka ilkaha bulshadu waa daryeelka ilkaha ee maamul gubaleedku wado hawshiisa. Daryeelka ilkaha bulshadu wuxuu carruurta siinayaa daryeel ilko oo joogto ah oo dhammeystiran ilaa iyo sannadka ay ka buuxinayaa 21 jir.
Marka laga hadlayo dhallinyarada megengelyo doonka ah waxay mas’uuliyadda maamul gobaleedku ku egtahay in ay siiso daryeel ilko marka uu qofka dhallinta yari buuxiyo 18 sano, si ka duwan dhallinyarada haysata sharciga degganaashada.
Dhammaan carruurta joogta Swiidhan waxaa ay xaq u leeyihiin in laga tallaalo sagaal cudur oo khatar ah. Dhammaan gabdhaha waxaa xitaa la siinayaa tallaal ku aaddan feyruska babilloomka (HPV) ee keena kansarka dhuunta ilmo galeenka ku dhaca.
Caafimaadka ardayga waxaa soo gelaya hawlaha la xiriira dawada, cilmu nafsiga, cilmu nafsiga bulshada iyo habka waxbaridda gaarka ah oo taageeraya horuumarka ardayga ee ku aaddan hadafka waxbarashada.
Caafimaadka ardaygu waxaa ka mid ah waxyaabaha uu bixinayo koontarool caafimaad, baaritaanno aragga iyo maqalka la xiriira.
Rugta qaabilaadda dhallinyarada waxaa loogu tala galay dhallinyarada laga billaabo 12-13 jir ilaa iyo 25 jir. Booqashooyinku waa lacag la’aan.
Taageerada uu qoysku xaqqa u leeyahay waxaa ay ku xirantahay hadba naafanimada canuggu uu qabo iyo inta ay taasi saameyn ku yeelaneyso baahida canugga ee maalinlaha ah. Waa degmada iyo maamul gobaleedka uu canuggu degganyahay labadaba kuwa mas’uulka ka ah in ay siiyaan taageero.
Taageero ka socota Qasnadda ceymiska haddii canuggaagu uu qabo naafanimo
Hagaha daryeelka caafimaadka 1177: Carruur leh naafanimo